Akhriso:-Garabka Cabdi Xaashi oo caddeeyay mowqifkooda ku aadan habraaca doorashooyinka Dalka. | Weheliye Online
Akhriso:-Garabka Cabdi Xaashi oo caddeeyay mowqifkooda ku aadan habraaca doorashooyinka Dalka.
Garabka uu hogaamiyo Guddoomiye Cabdi Xaashi ayaa shaaciyey mowqifkooda ku aadan habraacyada doorashada ee lagu soo saaray shirkii Golaha Wadatashiga Qaranka, kuwaasi oo qoddobo kamid ah ka horyimaadeen.
Qoraal ay soo saareen Garabka Cabdi Xaashi ayaa ugu horeyntii lagu soo dhaweeyay in doorashada kuraasta Aqalka Sare ee Somaliland la waafajiyey habraacyadii 2016-kii, islamarkaana ka go’aan gaaristeeda loo daayey hogaamiyeyaasha siyaasada iyo dhaqanka gobolada Waqooyi.
Garabka Cabdi Xaashi ayaa yiri “Waxaa Madasha Wadatashiga Qaranka iyo dhamaan daneeyayaasha kale ee doorashada u caddeynaynaa in aanan raali ka aheyn qaabka ay madashu u wajahday xulista ergada iyo cidda hageysa habraacyada iyo maamulka doorashada Somaliland.
”Garabka Cabdi Xaashi ayaa sheegay inay habraacan ku diideen saddex qodob oo ka mid ah:-
Previous articleMaxaa kasoo baxay kulamadii maanta ee Golaha Wadatashiga Qaran, Midowga Musharaxiinta iyo Guddiga..
Next articleMas’uuliyiin Ka Tirsan Puntland Oo Shaqo Joojin Lagu Sameeyay (Maxey tahay sababta).